The Good, The Great နှင့် Artificial Intelligence နှင့်အတူကြောက်စရာ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မေလ 11, 2017 ကြာသပတေးနေ့, မေလ 11, 2017 Douglas Karr
၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာရေတပ်မှကျွန်တော်ဂုဏ်ယူစွာထွက်ပြေးတုန်းကအချိန်ကောင်းပါပဲ။ အိုင်ဗန်တီထွင်မှုကို၎င်း၏အဓိကမဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အပြည့်အဝလက်ခံသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သောဗာဂျီးနီးယား၊ နော့ဖော့လ်ရှိ Virginian-Pilot တွင်ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဖိုင်ဘာတပ်ဆင်ပြီးကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးဂြိုလ်တုကိုဖယ်ထုတ်ပြီးပရိုဂရမ်မာ - logic Controllers များကိုကွန်ပျူတာများသို့ချိတ်ဆက်ပြီး Intranet မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုအဆင်ပြေစွာညှိနိုင်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည့်အချက်အလက်များကိုဖမ်းယူခဲ့သည်။ မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Landmark Communication သည်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေပြီးဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းသတင်းစာများရယူခြင်း။ ဝက်ဘ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဘဝပြောင်းလဲစေသည့်အရာဖြစ်ကြောင်းသိသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကပဲ၊ ဆာတိ Berners-Lee က အပါအ ၀ င်အလုပ်လုပ်သောဝက်ဘ်အတွက်လိုအပ်သောကိရိယာအားလုံးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည် HyperText Transfer Protocol (HTTP)၊ HyperText Markup ဘာသာစကား (HTML)ပထမဆုံးဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ၊ HTTP ဆာဗာဆော့ဝဲပထမ web server နှင့် ပထမဆုံးဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ စီမံကိန်းကိုသူ့ဟာသူဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးနှင့်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်အကိုင်သည်စာသားအားလုံးသည်သူ၏တီထွင်ဆန်းသစ်မှုကြောင့်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစကားမပြောတတ်ခြင်းကိုငါအမြဲတမ်းလိုချင်ခဲ့သည်။
၂၅ နှစ်ကြာပြီးနောက် IT ပြောင်းလဲခြင်း
Mark Schaefer သူ့ကိုအပေါ် join ဖို့ငါ့ကိုဖိတ်ကြားခဲ့သည် Luminaries - Tech မှတောက်ပသောစိတ်နှင့်စကားပြောခြင်းDell podcast သည်ကမ္ဘာ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိသောကုမ္ပဏီများနောက်ကွယ်ရှိခေါင်းဆောင်များအားများစွာထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။ စားသုံးသူများနှင့်ဆာဗာများကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ desktop နှင့် laptop များရောင်းချသောကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် Dell ကိုကျွန်တော်သိသော်လည်း၊ Dell Technologies ၏ယေဘုယျဂေဟစနစ်ကိုဤအခွင့်အလမ်းမရောက်မှီငါတစ်ခါမျှမသိခဲ့ပါ။ Dell ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုလူတွေ့မေးမြန်းတဲ့အခါမာ့ခ်နဲ့အတူငါလေးလေးစားစားဆက်ဆံတာကနေအနာဂတ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခရီးတစ်ခုပါပဲ။
နောက်မှထပ်ပြောပါ ဦး ။
အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရသည် Dell EMC ကမ္ဘာ့ဖလား Las Vegas မှာ (ဒီဟိုတယ်အခန်းစားပွဲမှာငါရေးနေတဲ့နေရာ) ။ မကြာခင်မှာပဲကျနော်တို့ Berners-Lee ကစကားပြောလိမ့်မယ်လို့, ငါတို့ထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ဉာဏ်ရည်တု။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖော်ပြရန်“ Giddy” သည်တစ်ခုတည်းသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ငါမာ့ခ်တစ်ချိန်ချိန်မှာအေးဆေးတည်ငြိမ်ဖို့ပြောတယ်ထင်ပါတယ်။ check စစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ မာ့ခ်ရဲ့အကြံဥာဏ်များ အဖြစ်ကောင်းစွာဒီမိန့်ခွန်းအပေါ်!
Art Timelligence အကြောင်း Sir Tim Berners-Lee
Sands Expo ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်စကားဝိုင်း၏မျဉ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ မာ့ခ်ျသည်နေရာတစ်နေရာကိုင်ထားသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးပေါ်မှတ်တမ်းမှပစ္စည်းများကိုအလျင်အမြန်ထုပ်ပိုးလိုက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ ငါတို့ထိုင်ပြီးမာ့ခ်ကကျွန်တော့်ဓာတ်ပုံကိုရိုက်တယ်။ woohoo! မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Sir Tim စင်မြင့်သို့လာပြီးဆွေးနွေးမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ သူသည် As ဇာက် Asimov နှင့်အာသာစီကလာ့ခ်တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမျှဝေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖခင်ကွယ်လွန်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ငယ်စဉ်အခါကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သောစာရေးဆရာနှစ်ယောက်ဖြစ်သည့် Star Trek နှင့်အတူ! အသက် ၁၆ နှစ်မှာကျွန်မရဲ့ဘဝနဲ့ဆင်တူတဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားရတာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေတုန်းပဲ။ ငါကနင့်ကိုဘယ်တော့မှနင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်ပဲ။
Berners-Lee ကသူသည် AI ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ကြောင်းလူတိုင်းကိုအသိပေးခဲ့သော်လည်းသူ၌ရှိသည့်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုများအပေါ်သူ၏အကြံအစည်အချို့ရှိသည်။ AI မှပေါ်ပေါက်လာမည့်အပြောင်းအလဲများကိုယခုအချိန်တွင်မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်နိုင်သော်လည်းလူသားတို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အဆုံးမဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုမည်သူမျှစောဒကမတက်ကြပါ။
As DellEMC ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာများတိုးတက်လာသည်။ ဥပမာ AI နှင့် Hyper-convergence သည်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတွင်ရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများလိုအပ်သကဲ့သို့ကွန်ပျူတာ၊ သိုလှောင်မှုနှင့်ကွန်ယက်ကိုအသိဥာဏ်ကြီးထွားစေသည်။ ကြီးမားသောပေါင်းစည်းမှု၊ မတူညီသောစနစ်များနှင့်လူ့အမှားများကိုလျှော့ချခြင်းသည်ကုမ္ပဏီများပိုမိုရောက်ရှိရန်ကူညီလိမ့်မည် ပစ်လွှတ်အလျင်, ဟူသောဝေါဟာရကိုဖြစ်ရပ်မှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြားဖူး။
အမှိုက်များကိုလျှော့ချရန်၊ ထိရောက်မှုရှိရန်နှင့်လူသားထု၏လူမှုရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများအားကူညီနိုင်မည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကို Berners-Lee ကဆွေးနွေးခဲ့သည်။
သင်၏ဘဏ္healthာရေးကျန်းမာရေးအပေါ် မူတည်၍ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်၊ အကြံပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်ညှိနှိုင်းနိုင်သည့်ဘဏ္systemsာရေးစနစ်များရှိခြင်းကိုကုမ္ပဏီ၏ရှုထောင့်မှကြည့်ပါ။ သို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းများ၏လှုံ့ဆော်မှုကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေသည့်မက်လုံးစနစ်များကိုဖွံ့ဖြိုးစေသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စနစ်များ။ (သို့) ပိုးသတ်ဆေးများနှင့်ရေကိုအသုံးပြုမှုကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ပေးသောစိုက်ပျိုးရေးစနစ်များကိုတောင်သူအားအကြောင်းကြားစရာမလိုပဲ။ ကုန်ပစ္စည်းအစီအစဉ်များ၊ အာရုံစူးစိုက်အုပ်စုများသို့မဟုတ်စမ်းသပ်ခြင်းများမလိုအပ်ဘဲအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုချဲ့ထွင်နိုင်သည့်အပြင်သုံးစွဲသူများ၏အတွေ့အကြုံများကိုပါတိုးမြှင့်နိုင်သည့်နည်းပညာကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်။
အလားအလာကိုစိတ် ၀ င်စားစေရန်နှင့်ဆွဲဆောင်ရန်အတွက်ဘာသာစကား၊ ပူဇော်သက္ကာ၊ ကြားခံနှင့်လမ်းကြောင်းများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောအတုထောက်လှမ်းရေးကိုစျေးကွက်တင်ခြင်း! ဝိုး!
အဆိုပါ အနည်းကိန်း တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်မြင့်မားသောတီထွင်မှုသည်ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာသောနည်းပညာတိုးတက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးလူ့ယဉ်ကျေးမှုကိုမပြောင်းလဲနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟူသောယူဆချက်ဖြစ်သည်။
တနည်းအားဖြင့်စနစ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်သောစနစ်များကိုတည်ဆောက်သောအခါဘာဖြစ်မည်နည်း။ သိပ္ပံဝတ္ထုသည်၎င်းကို Terminator ကဲ့သို့မကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိပြီးနည်းပညာသည်လူသားများကိုမလိုအပ်ဘဲဆုံးဖြတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးသည်။ Berners-Lee ၏ရူပါရုံသည်အကြမ်းမဖက်သော်လည်းကြီးမားသောစိုးရိမ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူဆွေးနွေးခဲ့သည့်ပြofနာတစ်ခုမှာစက်ရုပ်များမရှိခြင်း၊ အခွင့်အရေး။ နှင့်စီးပွားရေးနှင့်အစိုးရခေါင်းဆောင်များကျော်လွန်ပြီးပိုမိုရှုပ်ထွေးထိန်းချုပ်မှုစတင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် As ဇာက်သည် Asimov ရဲ့သုံးဥပဒေ.
စည်းမျဉ်းနံပါတ် ၁ ကိုဖောက်ဖျက်ပြီးသောအသိဉာဏ်ရှိသောစက်ရုပ်လက်နက်များကိုဖယ်ထားကြပါစို့ Berners-Lee ဖော်ပြသည့်ပြနာမှာစက်ရုပ်များသည်ပြissuesနာမဟုတ်ပါ။ ဉာဏ်ရည်တု ဟုတ်တယ် ကုမ္ပဏီများ များမှာ နည်းပညာနှင့်အားလုံးသည်သူတို့၏စီးပွားရေးကဏ္ aspect အသီးသီးတွင်ကူညီရန် AI ကိုအကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။ Mark သည် Domino ၏ Pizza ကိုဥပမာပေးလေ့ရှိသည်။ သူတို့ကနည်းပညာနှင့်အတူပီဇာကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသလား ဒါမှမဟုတ်သူတို့တစ်တွေ နည်းပညာကုမ္ပဏီကိုပီဇာပို့ဆောင်ရန်တည်ဆောက်ခဲ့သည်? ဒီဟာသိပ်နောက်ကျနေပြီ။
ထိုပြtheနာ? ကုမ္ပဏီများ do အခွင့်အရေးရှိရမည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏နည်းပညာများ ရှိ မွေးရာပါအခွင့်အရေးများ။ ထို့အပြင် proxy ဖြင့်ထိုကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သောအတုဥာဏ်သည်အခွင့်အရေးများရရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လူကြိုက်များမှုနှင့်အသုံးပြုမှုတို့တွင်အတုဥာဏ်သည်အရှိန်မြင့်လာသည်နှင့်အမျှဆွေးနွေးရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သူတို့၏အစုရှယ်ယာရှင်များအတွက်အကျိုးအမြတ်တစ်ခုခုဖန်တီးရန်အတုထောက်လှမ်းရေးကိုအသုံးပြုသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုရှိသောကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပျက်စီးစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ပူရန်လိုအပ်သည့်စက်ရုပ်များမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောအတုထောက်လှမ်းရေးဖြစ်သည်။
Berners-Lee ကအနည်းကိန်းဟာနှစ် ၅၀ အတွင်းမှာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထင်နေပါတယ်။ သူကသူ့ရဲ့သူ့ရဲ အကြိုးသငျ့အကွောငျးသငျ့လျြောကနျသော AI သည်လူ့ဉာဏ်ရည်ထက်သာလွန်လိမ့်မည်ဟုထင်မြင်ချက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့အံ့သြဖွယ်အချိန်များတွင်နေထိုင်ကြသည်! Berners-Lee ဟာအနာဂတ်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ အနာဂတ်မှာလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိမယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီများ၊ အစိုးရများနှင့်သိပ္ပံဝတ္ထုဇာတ်လမ်းတွေတောင်မှဒီကိစ္စကိုပိုမိုဆွေးနွေးရန်လိုအပ်သည်ဟုသူကပြောကြားခဲ့သည်။
ထုတ်ဖော် - Dell EMC World သို့တက်ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်၏ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုပေးပြီးကျွန်ုပ်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်သည် အလင်းအိမ် podcast ။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုညှိနှိုင်းပြီးသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တုံ့ပြန်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့တကယ်လိုချင်ပါသည်။
Tags: aiဘာနာလီconvergenceDelldell emcdell EMC ကမ္ဘာကြီးhyper- convergenceLas Vegasအလင်းအိမ်Mark SchaeferTim berners-lee